Bit By Bit - Abuuritaanka wada shaqeyn xooggan - 5.1 Hordhac
Wikipedia waa cajiib. Wadashaqeyn ballaaran oo mutadawiciin ah ayaa abuuray sheeko fantastik ah oo qof waliba heli karo. Fure u ah guushii Wikipedia ee maahan aqoon cusub; halkii, waxay ahayd qaab cusub oo iskaashi. Da'da dijitaalka, nasiib wanaag, waxay u suurtagelisaa noocyo badan oo wada shaqeyn ah. Sidaa daraadeed, waa in aan hadda weydiinnaa: Maxay yihiin dhibaatooyinka sayniska ee culus - dhibaatooyinka aynaan xallin karin shakhsiyaadka - miyaan la wadaageyn karnaa wadajir?
Waxaa jira noocyo badan oo wada shaqeyn xooggan, iyo saynisyahannada kombiyuutarku sida caadiga ah waxay u abaabulaan qaybo badan oo kala duwan oo ku saleysan astaamaha farsamada (Quinn and Bederson 2011) . Qaybtan, si kastaba ha ahaatee, waxaan doonayaa in aan uqayb galo mashruucyo iskaashi badan oo ku salaysan sida loo isticmaali karo cilmibaaris bulsheedka. Gaar ahaan, waxaan u maleynayaa in ay caawinayso qiyaas ahaan saddex nooc oo mashaariic ah: xisaabinta dadka , wicitaan furan , iyo xog ururinta xogta (Jaantus 5.1).
Waxaan sharxi doonaa mid kasta oo ka mid ah noocyadaas si faahfaahsan oo ka dambeeya cutubka, laakiin hadda waa inaan u sharaxaa mid kasta si kooban. Mashaariicda xisaabinta dadka ayaa si fudud ugu habboon dhibaatooyinka culus ee hawlaha waaweyn sida calaamadeynta hal milyan oo sawir. Kuwani waa mashaariic laga yaabo in laga yaabo inay horey u sameeyeen kaaliyeyaashii cilmibaarista ee shahaadada hoose. Saaxiibtinimadu uma baahna xirfad shaqo oo la xidhiidha, wax soo saarka ugu dambeeya waa caadi ahaan celcelis ahaan dhammaan deeqaha. Tusaalaha caadiga ah ee mashruuca xisaabinta bani'aadamnimada waa Galaxy Zoo, halkaasoo boqolaal kun oo tabarucayaal ah ay caawiyeen astronomers si ay u kala saaraan malaayiin galaxyo ah. Mashaariicda furan ee furan , dhinaca kale, ayaa ku haboon xalalka dhibaatooyinka aad u raadineyso jawaabo cusub oo aan la filayn si su'aalaha loo diyaariyey. Kuwani waa mashaariic laga yaabo inay horeba uga qaybqaataan weydiinta asxaabta. Kaalmooyinka ayaa ka yimid dad leh xirfado gaar ah oo la xiriira shaqada, iyo soo-saarka ugu dambeeya waa sida ugu fiican ee dhammaan deeqda. Tusaalaha caadiga ah ee wicitaan furan waa Netflix Prize, halkaas oo kumanaan cilmi-yaqaan iyo hackers ay ka shaqeynayeen horumarinta algorithms cusub si ay u saadaaliyaan qiimayaasha macaamiisha ee qiimayaasha. Ugu dambeyntii, mashaariicda ururinta xog ururinta ayaa si ku haboon loogu ururiyey xog ururin ballaaran. Kuwani waa mashruucyo horey loo soo qabtay oo ay sameeyeen kalkaaliyeyaasha cilmi-baarista ee shahaadada hoose ama shirkadaha cilmi baarista. Kaalmooyinka caadi ahaan waxay ka yimaadaan dadka helaya goobaha ay cilmi-baarayaashu aysan sameynin, iyo badeecaddu kama dambaysta ah waa urur fudud oo ka mid ah deeqaha. Tusaalaha caadiga ah ee ururinta xog ururinta waa eBird, kaas oo boqollaal kun oo mutadawiciin ah ay ka qayb qaataan warbixinno ku saabsan shimbiraha ay arkeen.
Iskaashiga dadweynuhu wuxuu leeyahay taariikh dheer oo taajir ah oo ku saabsan sida astronomy (Marshall, Lintott, and Fletcher 2015) iyo ekologi (Dickinson, Zuckerberg, and Bonter 2010) , laakiin weli ma ahan mid cilmi-baaris bulsheed. Si kastaba ha noqotee, adoo sharaxaya mashaariic guuleysta oo ka yimaada dhinacyada kale iyo bixinta mabaadi'da aasaasiga ah ee muhiimka ah, waxaan rajeynayaa inaan ku qanciyo laba shey. Marka hore, iskaashiga ballaaran waxaa laga yaabaa in loo adeegsado cilmibaarista bulshada. Iyo, labaad, cilmi-baarayaasha isticmaala wadashaqeyn xooggan waxay awood u yeelan doonaan inay xalliyaan masalooyinka horay u muuqday kuwo aan macquul ahayn. Inkasta oo iskaashiga isgaarsiintu ay badanaa kor u qaadaan habka lagu badbaadinayo lacagta, waa wax ka badan tan. Sida aan ku tusi doono, wadashaqeyn ballaaran maaha oo kaliya noo ogolaanaysa in aan samayno cilmi-baaris ka raqiisan , waxay noo ogolaanaysaa inaan samayno baaritaan ka sii wanaagsan .
Cutubyada hore, waxaad aragtay waxa la baran karo iyada oo dadka lala galo saddex siyaabood oo kala duwan: kormeerida dabeecadooda (Cutubka 2), waydiinayaan su'aalaha (Cutubka 3), oo ay ku qoraan tijaabooyinka (Cutubka 4). Cutubkan dhexdiisa, waxaan ku tusi doonaa waxa laga baran karo iyada oo dadku ay ka mid yihiin wadashaqeyn cilmi baarayaal ah. Mid kasta oo ka mid ah saddexda nooc ee wadashaqeyn ballaaran, waxaan ku tilmaami doonaa tusaalayaal shahaadooyin ah, oo muujinaya qodobo muhiim ah oo dheeraad ah oo leh tusaalooyin dheeraad ah, ugu dambeynna sharaxaad ka bixi sida qaabkan wada shaqaynta guud loo adeegsan karo cilmi baarista bulshada. Cutubka wuxuu soo gabagabeynayaa shan mabda 'oo kaa caawin kara inaad abuurto mashruuc wada shaqeyneed.